Messe chrismale ho an’ny Diosezin’Antananarivo - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nanavao ny toky nataony tamin'ny fotoana nanamasinana azy ny pretra sy diakra ao amin'ny Diosezin'Antananarivo, ny zoma 19 marsa teo. Niaraka tamin'izany koa moa ny fanamasinana ireo menaka masina fampiasan'ny fiangonana amin'ny Sakramenta samihafa dia :
- Ny menaka manitra, na menaky ny voahosotra (krisma na saint chrème) izay menaka oliva nafangaro amin'ny hanitra manokana. Ampiasaina amin'ny batemy, ny fankaherezana, ny fanosorana ho diakra sy pretra ary eveka. Ny olona mandray ireo sakramenta ireo dia "voahosotra"sy mandray ny fanahy maha iraka (Mesia) hitory.
- Ny menaky ny katekomena. Izy ity dia menaka oliva, izay ahosotra indrindra ho an'ny katekomena na ireo olon-dehibe atao batemy. Midika ho fahasoavana sy fifaliana ary fidiovana. Mandritra ny sabotsy masina, alin'ny paka, no tena ampiasana azy satria eo ko no fotoana fanaovana batemy ny olon-dehibe.
- Ny menaka fanosorana ny marary. Ity menaka ity izay nalaina tamin'ny oliva ihany koa dia ahosotra ny marary mandritra ny fanomezana ny sakramentan'ny fanosorana ny marary. Midika ho menaka fanasitranana, manala ny manaintaina ny famiasana azy io. Hosorana ity menaka ity ny tanana sy ny loha ary ny tratran'ny marary mandray ny sakramenta.
Matetika dia ny Alakamisy masina no fanaovana ity Messe Chrismale ity (fa izay moa no filaza azy amin'ny teny frantsay), saingy mazàna dia mba miara-mankalaza izany andro lehibe anatin'ny herinandro masina izany any amin'ny distrika sy paroasy iandraiketany ny pretra sy diakra, ka izay no amindran'ny tompon'andraikitra amin'ny diosezy sasantsasany ny andro anaovana an'izy io.
Tsiahivina fa ao anatin’ny fankalazana ny faha 160 taona nidiran’ny finoana katolika tao aminy ny diosezin’Antananarivo.
Seminarista 12 mirahalahy koa no niroso ho eo amin'ny laharan'ny diakra ka nohasinina sy notsofin-drano tamin'io andro io.
Niompana tamin'ny fiainam-pianakaviana tokony haka ho modely ny Fianakaviana Masina ny fivoasana ny Vakiteny Masina nataon'i Mgr Jean Pascal Andriantsoavina, eveka mpanampy ao amin'ny Diosezin'Antananarivo. Fetin'i Md Jozefa, ray mpitaiza an'i Jesoa sady vadin'i Masina Maria, modelin’ny raim-pianakaviana mahafoy tena sy tia ny fianakaviany rahateo moa ny andro nanaovana ny fankalazana tao an-drenivohitra.